Black Magic: Webcam7PRO 1.2.4.0 Build 38987 Final [13.74 MB]
Webcam7PRO 1.2.4.0 Build 38987 Final [13.74 MB]
Posted by Black Magic | Posted in Computer Softwares | Posted on 5:45 AM
Webcam7 is the most popular webcam and network camera software for Windows. It allows you to monitor your belongings from any location with access to Internet by turning your computer intoasecurity system.
Webcam7PRO ဆော့ဝဲလ်လေးနဲ့ ကင်မရာတွေကို ချိတ်ဆက်ပြီး အင်တာနက် ရှိတဲ့နေရာတွေ၊ Network ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ နေရာတွေကို အလွယ်တကူ ကြည့်ရူအသုံးပြုလို့ ရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်..။ USB ကင်မရာ၊ ဖုန်းကင်မရာတွေနဲ့ တခြား Support လုပ်ပေးတဲ့ ကင်မရာတွေနဲ့ ဒီကောင်လေးကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်..။ Support လုပ်ပေးတဲ့ ကင်မရာအမျိုးအစားတွေကိုတော့ဒီ Post ရဲ့ အောက်ဆုံးမှာပေးထားပါတယ်....၊ Full Version သုံးလို့ ရအောင် keygen လည်းပါပါတယ်...၊ Keygen မသုံးတတ်တဲ့သူတွေအတွက် Full Version ဖြစ်အောင်လုပ်နည်းကိုလည်း ပုံနဲ့ ရှင်းပြထားပါတယ်...၊ အသုံးလိုတဲ့သူများကတော့ အောက်ကလင့်ကနေ ဒေါင်းယူလိုက်ပါဗျာ..။ ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 14 MB ရှိပါတယ်..။
Download Webcam7PRO 1.2.4.0 Build 38987 Final
Zippyshare | Solidfiles | Sharebeast | Mirrorcreator
ဒီကောင်လေးကို Install ထည့်ပြီးတာနဲ့ ဖွင့်လိုက်ပါ..။ အပေါ်ကပုံအတိုင်း ရွေးပြီး OK ပေးပြီး.. keygen ကို ဖွင့်၊ နာမည်ထည့်ပြီးမှ Genarate ကို ကလစ်ပါ..။ ပေါ်လာတဲ့ ကီးတွေကို copy ယူပြီး အောက်ကပုံအတိုင်း ထည့်ပေးလိုက်ရင် ဒီကောင်လေးကို ဖူးသုံးလို့ ရသွားပါပြီ..။
ဖူသုံးလို့ ရသွားပြီဖြစ်တဲ့ ဒီကောင်လေးကို စပို့လုပ်ပေးတဲ့ ၊ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ ကင်မရာတွေကတော့ မူရင်းဆိုဒ်မှာ ဖေါ်ပြပေးထားတဲ့အတိုင်း ဒီမှာ ပြန်လည် ဖေါ်ပြပေးထားပါတယ်..။ အားလုံးပဲ အဆင်ပြေပါစေ..။